Go’aankii Somaliland Ay Kula Safatay Xulufada Sucuudiga Oo Aan Shaqayn Iyo Diyaaraddo Ay Leedahay Dalka Qadar Oo Xalay Ilaa Saaka Isticmaalayey Hawada Somaliland - Wargane News
Home Somali News Go’aankii Somaliland Ay Kula Safatay Xulufada Sucuudiga Oo Aan Shaqayn Iyo Diyaaraddo...
Iyada oo xukuumadda Somaliland shalay ay ku dhawaaqday inay taageersan tahay go’doonka ay wadamada Khaliijka ee uu hoggaaminayo Sucuudiga iyo Imaaraadku galiyeen dalka Qatar isla markaana ay golaha wasiiradda xukuumadda madaxwayne Siilaanyo shalay kulan ay iskugu yimaadeen kasoo saaray afar qodob oo ay ku taageersan yihiin wadamada Khaliijka ee go’doonka galiyey Qatar kuwaas oo aan ilaa hadda noqon qaar hirgala.
Waxaana sida lagu arkayey raadaarada hawada ee la socda dhaq-dhaqaaqa diyaaradaha dalka kaste hawadooda socda ayaa waxa ilaa xalay diyaarado ay leedahay dalka Qatar lagu arkayey iyaga oo si caadi ah u isticmaalaya hawada Somaliland oo ay xukuumadda Somaliland shalay ku dhawaaqday in aanay dalka Qatar isticmaali Karin fasax la’aan Hawada Somaliland isla markaana ay Somaliland xidhiidhka u jartay dalka Qatar lana safatay xulufada Khaliifka ee ay hogaaminayaan Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabtu.
Waxaana diyaaradahan ay ilaa xalay iska dul marayeen hawada Somaliland iyada oo xukuumadda Somaliland go’aamo kasoo saartay balse waxan aan ilaa hadda la garanayn sababta ay u hirgali waayeen go’aamada ay dalka Qatar kasoo saartay Xukuumadda Somaliland ee ay ku go’doomisay,waxaana bulshada Somaliland ay aad ilaa xalay ilaa saaka u qaada dhigayaan diyaaradahan dalka Qatar ee isticmaalaya hawada Somaliland,sidoo kale shacabka ayaa su’aalo badan is waydiinaya iyaga oo su’aalahaasina ay kamid yihiin “Diyaaradahan dalka Qatar ee hawada Somaliland isticmaalaya ma waxay amar ka haystaan hay’adda gacanta ku haysa hawada Somaliland iyo Soomaaliya ee ICAO? Mise Soomaaliya ayaa ay fasax ka haystaan madaama oo Somaliya ay dhex ka tahay khilaafkan Diblomaasiyadeed ee Khaliijka ka qarxay kana dhawaajisay in diyaaradaha Qatar isticmaali karaan hawada Somaliya?.
Sidoo kale raadaarada hawada ee la socda dhaq-dhaqaaqa diyaaradaha iyo dalalka ay hawadooda ku jiraan ayaa saaka waxay sheegayaan in waabarigii hore ay diyaarad ay leedahay dalka Qatar ay dulmaraysay hawada Somaliland gaar ahaana caasimada Hargeysa,diyaraddan ayaa kasoo kacday magaalada Khartuum ee dalka Sudaan kuna socotay Doha Qatar.
Ilaa haddana ma jirto cid ka hadashay diyaaradahan wali isticmaalaya hawada Somaliland ee laga leeyahay dalka Qatar,balse wasiirka wasaaradda Duulista iyo Hawada Somaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa sheegay shalay in diyaaradaha Qatar ay isticmaalayaan hawada Somaliland.
Dhinaca kale Mujaahid Cali Gurey ayaa qoraal kooban oo uu baahiyey kaga hadlay go’aanka xukuumadda Somaliland kula safatay wadamada Khaliifka ee go’doonka galiyey Qatar, waxaana uu sheegay in ilaa hadda aanay xukuumada Somaliland cadayn waxay dhaafsiisatay taageerada dhinaca xulufada Sucuudiga iyo Imaaraadku hogaaminayo.
Waxa uu Cali Gurey sheegay in caalamka aanay jirin dawlad taageerta dawlad kale iyada oo aan dan ku qabin isaga oo tusaale usoo qaatay xukuumadda xamar oo uu sheegay go’aanka ay ka qaadatay Qatar in ay ku badalatay dano iyada u gaar ah.
Qoralka uu Cali Gurey baahiyey ayaa waxa uu u dhignaa sida tan
“WADA DANAYSI HAA ISKU DANAYSI MAYA”
“Ka badbadinta Qatar inay dheeraad tahay gartay laakiin markay mawaaqiif tahay arinku waa dano waxanay ku fiican tahay aynu wada danaysanno. Inagu dhinaca Imaaraadka oo wax gaar ahi inaga dhexeeyaan haddii aynu markanna toodii raacnay ma danteeda ayaynu ku raacnay mise inagana danteena ayaa meesha ku jirta oo waynu ka wada hadanay waxa aynu dhaafsanayno taageerada dhinaca Imaaraadka Carabta iyo sucuudiga. Caalamka wax bilaash ahi ma jiro waynu iska taageernay ayuun baanan anigu liqi karin waayo Dawladda Muqdisho waan hubaa inay garanayaan waxay uga jeedo mawqifka ay ka qaadatay arinkan Qatar waxa ay ka siisanayaan in aanay u soo raacin xulafada isu bahaysatay wqxan filayaa inay garanayaan kol ay baayacaadda dhinaca kale kor ugu qaadayaan ama Qatar wax wayn kaga bedelanayaan. Laakiin Somaliland mooyi balse waxa la leeyahay wafti Somaliland ah ay maalmaha soo socda u kicitinaya dalka Imaaraadka Carabta bal aan sugno waxa ay la soo noqdaan”